China-Ndlela ezine Multi Shuttle umzi-mveliso kunye nabavelisi |UKWAZISA
1 Automatic single inbound Ukwamkelwa komyalelo ovela kwikhompyuter yenginginya, ngokuzenzekela ukuhambisa ibhokisi kwindawo yebuffer yangaphakathi ukuya kwindawo echaziweyo.
6 Ulawulo lomsebenzi Yamkela imiyalelo yomsebenzi ukusombulula umendo womsebenzi.
7 Umsebenzi okude Iyakwazi ukuhlaziya kunye nokukhuphela inkqubo ukude (Kwi-Wi-Fi Network).
8 esweni inkqubo Ijonga idatha yenkqubo ngexesha lokwenyani kunye ne-alam ephakanyiswe kwisandi kunye nokukhanya kwimeko engaqhelekanga.
9 Ukujonga ukubetha kwentliziyo Nxibelelana ukubamba inkqubo yolawulo lwekhompyuter ngexesha lokwenyani ngokujonga ukubetha kwentliziyo, ukubeka iliso kwi-intanethi
10 Ukuyeka ngokuNgxamisekileyo Uphawu olungxamisekileyo luthunyelwe ukude ngexesha likaxakeka, kwaye i-shuttle iyama ngoko nangoko de kunyuswe imeko kaxakeka.
Uhlobo lwephakheji yempahla: Imigqomo, iibhokisi, iitoti kunye nokunye.
Ubungakanani bempahla (mm): Ububanzi 200-600mm, Ubunzulu 200-800mm, Ubude 100-400mm
Ubunzima obuhle: <= 35kg
Ubude bokusebenza: <=15m
 Indlela emine yokubaleka.
Umthamo wokusebenza 3-4 amaxesha kune-AS/RS.
Ifaneleke kakhulu imigqomo emincinci, iibhokisi, ugcino, ukuchola, umsebenzi wokugcwalisa.
Kuyenzeka ukongeza ngokuguquguqukayo iishuttles ezininzi kulo naliphi na inqanaba kunye nokuphucula inkqubo yokusebenza ngokweemfuno zoshishino.
Isisombululo esisebenzayo sokugcinwa kwethutyana kunye nokusebenza kwenkxaso kwicala lomgca wemveliso.
 Ukusebenza kwangaphakathi nokuphumayo: Ubuninzi bemigqomo/iibhokisi ngeyure_____.
Iindlela ezine Multi Shuttle ziya kuvavanywa phambi kokuhanjiswa.Injineli iya kuvavanya yonke inkqubo kwisiza okanye kwi-intanethi.
Ngaphambili: I-Attic Shuttle
Okulandelayo: Iindlela ezine kwiRadio Shuttle
IShuttle yomntwana, ICarton Live, Umhambisi, I-Four Way Shuttle, Asrs Ugcino, Qhuba kwi Racking,